Second King Of The Knowledge War
နှစ်သက်သော Blog များ
ကို‌ဇော်.ဒဂုံ ၏ ဖန်တီးချက်‌လေးများ(NPT-IWT)
နည်းပညာ site များ
- လိပ်စာများ -ကိုဇော်၏ နည်းပညာသံလုံငယ်မြန်မာ ITကိုမိုးထက်မြင့်ကွန်ပျူတာဗဟုသုတဆန္ဒချင်းမတိုက်ဆိုင်သူများလင်းငယ်စာအုပ်လေးတစ်အလုပ်Diary of IT Man IT Knowledge ဇောင်းSOETHI
သုတ/ ရသ/ ဗဟုသုတ blog များ
- လိပ်စာများ -mmNETmazeာသက်ထွန်းဦးမေခင်မွန်းBetter Tomorrowနေဇင်လတ်
Start --- Run box တွင်ရိုက်ပြီး စမ်းကြည့်ပါ။ ( Windows Key + R key ကိုတွဲနှိပ်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။) ကျွန်တော်လဲ နဲနဲပဲသိတာပါ သူများတွေဆီက ဟိုစု၊ ဒီစုပေါ့….. ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့လဲ မြန်မြန် ပြေးသွား ချင်မှာပဲလို့ တွေးပြီး စုစောင်းတင်ပြပေးလိုက် တာပါ…. တကယ် ဘုရားစူးပါစေရဲ့ နည်းနည်ပဲ သိတယ်…… သူငယ်ချင်းတို့ များများမှတ်ပြီး အမြန်ပြေးပေးတော့ ဗျို့………………………..
timedate.cpl——- ddeshareDevice Manager——- devmgmt.msc
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရှာထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ကို စေတနာအပြည့်နဲ့ တင်ပေးထားတာပါ….. မူရင်း ရေးသားသူများကို ကျေးဇူးတင်ပေးရင်း ပညာ ထပ်တိုးဖို့ ဆုတောင်းပေးပါဦး… အော် ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ သိထားတာတွေ ရှိရင်လဲ ထပ်ဖြည့်ပေးဦးနော်……
Posted by bayinnoung at 1:09 AM
Anti Virus လေးတစ်ခုပေးချင်တယ်ဗျာ
သုံးရတာကောင်းပါတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ..... Alert အသံလေးကလဲ နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ အင်တာနက် မရှိသူတွေလဲ UPD zip ဖိုင်လေးဒေါင်းလုပ်ချပြီး manual update လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်....
အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ဗျာမိုးတွင်းမှာ တစ်လောကလုံးကို ရွာနေတဲ့ မိုးစက်တွေ မိမိကိုယ်ပေါ် မစိုအောင် ကာကွယ်ပေးသလိုပေါ့.. ကျွန်တော်ပေးတဲ့ Antivirus လေးကလဲ ထီးပုံစံလေးပဲ အဲဒီထီးလေးနဲ့ မိမိ စက်ကို ဗိုင်းရပ်မိုးတွေ မ၀င်အောင် ကာကွယ်သလိုပေါ့... ဟဲဟဲ ညွန်းလိုက်တာဆိုတာလေ......
ပြောနေကြာပါတယ် ဘော်ဒါတို့ရာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ မကြိုက်ရင်လဲ နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော့
Posted by bayinnoung at 1:54 AM
KAV Keys 7- 8- 9
KAV Keys လေးများအစဉ်ပြေရင်ယူပါဗျာ
ကဲဗျာ Kav လို့ခေါ်တဲ့ Antivirus လေးအတွက် စိတ်ညစ်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အကူညီဖြစ်မယ်ထင်လို့ ပေးချင်လို့ပါဗျာ ကျွန်တော်သုံးတာတော့ အစဉ်ပြေတယ်ဗျ။ သူငယ်ချင်းအတွက်လဲ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ KAV 7- 8-9အကုန်သုံးလို့ရတယ် ကျွန်တော် ကတော့ အသုံမကျဘူးလို့ ပြောမလားမသိဘူး7ကိုကြိုက်လို့ သုံတယ်။ အစဉ်ပြေပါတယ် သူ့ရက်ရောက်တဲ့ အထိပေါ့ ကဲ လိုချင်သော ဘော်ဒါများ ဒေါင်ပေးပါဦးဗျာ .... တော်ကြာ Download ဖိုင်လေး မျက်နှာ ငယ်နေဦးမယ်။
Posted by bayinnoung at 7:58 AM
ကဲဒီနေ့ ၂၀ နေ့ကစပြီး blog လောကထဲကိုပြန်လည် ၀င်ရောက်လာပြီဗျ.....
အရင်တုန်းက မအားလို့ပါဗျာ၊ ကျောင်းစာတွေနဲ့ စာမေးပွဲကလဲဖြေနေရလို့ပါ..
အခုပုံမှန်ပြန်ရေးပေးတော့မယ်နော်.... လာရောက်ကြည့်ရှု့ လည်ပါတ်သူ အပေါင်းကိုလည်း လေးစား၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..
စောင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါပဲဗျာ.....
ကျွန်တော်ကိုလိုအပ်တာရှိရင်လည်း သင်ပေးပါဗျာ၊ ရေးထားတာမပြည့်စုံရင်လဲ ပြောပြပေးပါဗျာ၊ ပညာရှင်မဟုတ်ပဲ ၀ါသနာကြီးလွန်းအား ကြီတော့ လိုအပ်မှာ စိုးလို့ပါ။......
Posted by bayinnoung at 7:29 AM
Download Flesh Player 10
Flesh Player 10
Flesh player မှရှိလို့ ဘလော့တွေက movies တွေ၊ flesh ဖိုင်လေးတွေ ကြည့်လို့ မရတဲ့ သူငယ်ချင်များအတွက် Flesh Player လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံး version တော့မဟုတ်ဘူး။ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်....
ကျွန်တော်လဲဗျာ ကျောင်းစာတွေရော၊ အလုပ်တွေရော၊ အလုပ်စာတွေရော များနေလို့ပါ။ မတင်ဖြစ်တာ ဒါကြောင့်ပါ။ ခဏတော့ သည်းခံပြီး စောင့်ပေးပါဦးဗျာ
Posted by bayinnoung at 3:55 AM
Skin Design: Bayinnoung